Ciyaaraha | Mustaqbal Radio | Page 30
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha (page 30)
Real Madrid xiddiggeeda Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay markii 50-aad goolasha hat-trick koox iyo Qaranba 6-3 keddib kulankii ay uga badiyeen Girona. Laacibkan oo 33-jir ah ayaa dhaliyay goolkiisa Furitaanka daqiiqaddii 11-aad, isagoo fursad ka helay Toni Kroos wuxuuna ka tuuray 12 yaardi meel u jirta goosha. Cristhian Stuani ayaa bareejeeyay ka hor inta uusan Ronaldo hoggaanka usoo celin ...
Naadiga AC Milan ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay qandaraaska u kordhiso tababare Gennaro Gattuso. Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ayaa lagu soo waramayaa inuu hishiiska u kor dhinayo Rossoneri tan iyo markii uu yimid 2017, isagoo kooxdiisa ka caawiyay inay si dhaqso ah ku bilowdaan 2018ka. Tan iyo markii ugu danbeysay ee kooxda reer Talyaani ay ...
Real Madrid iyo Paris Saint-Germain oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig Juventus u ciyaara.
Kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa weeraryahanka Juventus Paulo Dybala xagaagaan. Sida laga soo xigtay Calciomercato, kooxda reer Talyaani ayaa diyaar u ah inay dhageysato dalabyada laga soo gudbiyay xiddiga reer Argentina. Real iyo PSG ayaa lagu soo waramayaa inay Dybala ku tilmaameen bedelka Neymar, iyadoo Los Blancos ay shaaca ...
Paul Scholes: oo eedeyn usoo jeediyay Paul Pogba.
Halyeeyga Manchester United Paul Scholes ayaa qirtay in Paul Pogba uusan ku fiicneyn inuu boos ka helo shaxda Jose Mourinho. Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa mar kale ka maqnaa kulankii wareega 8da ee FA Cup ee ay ka badiyeen Brighton & Hove Albion, isagoo sidoo kale loo magacaabay bedelka kulankii United ee Champions League ee ay la ciyaareen Sevilla bartamihii ...
Real Madrid oo qorsheyneysa inay lasoo wareegto gool hayaha kooxda Roma Alisson.
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay goolhayaha Roma Alisson mid ka mid ah bartilmaameedkooda ugu sarreeya xagaagan. Bilihii dhawaa, Real ayaa lala xiriiriyay dhowr ciyaaryahan oo laga yaabo inay bedeli karaan goolhaye Keylor Navas, oo ay ku jiraan David de Gea iyo Thibaut Courtois. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo, ...
Mohamed Saalah:” waan ku faraxsanahay Joogista Liverpool”
Weeraryahanka Liverpool Momahmed Saalah waxa uu Xoojiyay in u ku faraxsanyahay joogista Liverpol inkastoo ay jiraan wararka xanta ah ee lala xiriirinayo Real Madrid. 25 jirkan ku raaxesanaya Joogitaanla Liverpool sanadkan ayaa Horay waxaa laga soo iibsaday Rooma waxaana lagu iibsaday 37 .8 Milyan sanadkii Tagay waxa uu Hada Heestaa rikoorka Goal dhalinta waxa uuna dhaliyaya 33 goal Tartanada ...